ʿAbd-al-Bahāʾ - Wikipedia
I ʿAbd-al-Bahāʾ no mpandimby an' i Bahāʾ-Allāh teo amin' ny fitantanana ny fivavahana bahay. Taorian' ny nahahatesan' i Bahāʾ-Allāh dia nafindra tamin' ny lahimatoany atao hoe ʿAbbās Effendi (1844-1921) ny fitantanana ny fikambanana bahay. Teraka tao Teheràna i ʿAbbās Effendi ary nambara fa ʿAbd-al-Bahāʾ ("Andevo miasa ho an' ny famirapiratan' Andriamanitra"). Nomena ny anarana hoe "Ivon' ny Fanekem-pihavanana" sy "Lohan' ny Finoana" izy, afaka manazava ny hafatra nentin-drainy, izay nanendry azy ho hany tokana mpanazava manam-pahefana amin' ny asasorany.
Nandao ny Tany Masina izy tamin'ny volana Aogositra 1911 dia nadeha tany Eorôpa ka nivahiny tao nandrita ny efa-bolana, indrindra tao Londra sy Parisy. Nihaona tamin'ny mpino bahay tandrefana izy ka nanao valandresaka momba ny finoana bahay sy ny foto-dalàny. Tamin'ny lohataona 1912 i ʿAbd-al-Bahāʾ dia nanao dia lava nandritra ny iray taona indray tany Eorôpa sy tany Etazonia ary tany Kanada. Nanampy azy amin'ny fampielezana ny finoana bahay tany Andrefana izany ka niteraka fandrosoana lehibe, indrindra tany India sy Etazonia ary Eorôpa.
Nodimandry tao Haifa i ʿAbd-al-Bahāʾ tamin'ny 28 Novambra 1921, taorian'ny nanedreny ny zafikeliny, dia i Shoghi Effendi (1897-1957), ho mpandimby azy eo amin'ny asan' ny Mpiambina ny finoana bahay. Nalevina tao aminy maozolean'ny Bāb eo amin' ny tendrombohitra Karmela (Carmel) ao Haifa izy ka ao hatraminizao, mandra-panamboarana ny maozolea natokana ho azy manokana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=ʿAbd-al-Bahāʾ&oldid=1001632"
Voaova farany tamin'ny 22 Febroary 2021 amin'ny 18:41 ity pejy ity.